Sarin-Dasopy Tatsinanana, Sakafo Ianohan’i Japan Niaka-Danja Ho Zavakanto Voakaly Fatratra · Global Voices teny Malagasy
Sarin-Dasopy Tatsinanana, Sakafo Ianohan'i Japan Niaka-Danja Ho Zavakanto Voakaly Fatratra
Voadika ny 06 Marsa 2016 7:20 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, Italiano, English
“Lasopy shinoa miaraka amin'ny didin-kenan-kisoa telo.” Sary avy amin'i uka0310 mpisera Flickr, CC BY 2.0
Raha mahazatra kokoa an'izao tontolo izao ny sushi, ny sakafo tian'i Japan kosa indray dia ny paty ikarakarana ny antsointsika malagasy hoe lasopy shinoa [tatsinanana].
Ny paty iray baolina, misy hena sy legioma voatetika, atolotra miaraka amin'ny ro mahamay dia sady sakafo atoandro no fomba mahomby indrindra hanalana makafoka raha nandany ny alina tany amin'ny fisotroan-toaka.
Efa miaka-daharana amin'ny zavakanton'ny hanim-py ao Japan ny lasopy [shinoa] tatsinanana. Ireharehan'ny firenena ny karazan-dasopy mifototra arakaraky ny fomba ikarakarana na izay faritra ao Japan niavian'ilay [paty] lasopy tatsinanana — samy manana ny endrika mampiavaka azy amin'ny Sapporo raha any avaratra ary Fukuoka raha any atsimoandrefana ny faritra tsirairay.
Maro dia maro tokoa ny karazana bilaogy sy famoaham-boky aman-gazety natokana ho an'ny lasopy ao Japan.
Ramen Walker, gazetiboky iray nanokatena amin'ny fakana santionany sy amin'ny fanasokajian-javatra aza dia nanangana sarintanin'ireo hotely japoney fihinanan-dasopy manerana ny firenena.
Matetika ihany koa ilay gazetiboky mamoaka sary sy todika fohy amin'ireo hotelin-dasopy ao amin'ny kaontiny Twitter.
Nanandrana lasopy akoho tao anaty ro masira tamin'ny vidiny $6 amerikanina izahay tao amin'ny “Paty Bishomenten & Trano Fihinanana.” (Tanànan'i Hino, Tokyo)
Lasopy masira amin'ny vidiny $6,50 amerikanina Tao amin'ny tranon-dasopy varimbazahamainty “Seosan” (Asaka, Saitama)
Lasopy amin'ny vidiny $6,50 amerikanina tao amin'ny toerana vaovaon'ny lasopy Yoshikawa ao Kawagoe (Saitama)
Ny aingitraingitra amin'ny fihinanan-dasopy dia mety miainga amin'ny toeram-pihinanana mitsangana ao anaty garan-damasinina ka hatramin'ny toeram-pihinanana mipetraka manana tolotra maro sy toy ny any anatin'ny toeram-pihinanana avo lentan'ny shinoa.
Maro koa ny tanàna ao Japan no manana kolontsain-tsakafo an-dalambe mavitrika, ary ao anatin'izany ny lasopy tatsinanana.
Ny sasany amin'ireo mpikarakara lasopy dia mamelatra ny varotra isan'alina ao aorian'ireo kamiao kely nasaiam-panamboarana, tahaka ity kamiao iray mandeha an-dalana ao Tsuruga ity:
Ao amin'ny kamiaon-dasopy “Iked-ya Gonchan” ao Tsuruga, Fukui (*´﹃｀*) [#JR Tours Shizuoka]
Miorina ao Japan ihany koa ny Mozean-Dasopy Yokohama. Ankilan'ny fijery ankapoben'ny tantaran'ny lasopy ao Japan, dia noforonin'ny Mozean-Dasopy ao Yokohama indray i Japanan'ny taona 1958. Taon-dehibe tokoa io, satria tamin'ny taona 1958 no namarotan'ny orinasa Nissin ny paty masaka eo noho eo voalohany indrindra manerantany.
Miteraka fahatsiarovana mampanembona amin'ny fiainana tsotra kokoa tao Japan ihany koa ny taona 1958 izay voatsangana taorian'ny ady lehibe faharoa ary nanomboka nisitraka ny fanambinana ara-materialy.
Tsy tahaka an'i Ramen Walker, fa tsy hita loatra amin'i Twitter ny Mozean-Dasopy Tokyo, saingy namoaka sary tokotokony ho telopolo teo ho eo tao amin'ny kaonty Instagram ry zareo.
A photo posted by 新横浜ラーメン博物館(ramen museum) (@ramenmuseum) on Sep 30, 2015 at 4:35am PDT
Sehatra an-dalambe iray ao Japan araka ny tokony ho endriny tany amin'ny taona 1958 tany ho any. Fahiny mampanembona!
Raha nandranitra ny hanoananao ity resaka lasopy tatsinanana ity ary te-hamakivaky ny tontolon'ny chukamen (中華麺) — na paty shinoa — ianao, Ny All About Japan kosa nanangona lisitry Bilaogera an-tampon'i Japan amin'ny lasopy tatsinanana.